အောက်တိုဘာ 22ရက်နေ့ USA မှာလူ သန်း (၂၀၀) Covid19 ကာကွယ် ဆေး စထိုးမယ့် အကြောင်း ပြောလာ တဲ့ လွင်မိုး – Shwe Ba
ပရိသတ်ကြီး ရေ Covid-19 လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ဟာ Second Wave အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ထပ်မံ ပျံ့ပွားလျက်ရှိပါတယ် ။ ရောဂါကို ကာကွယ်မယ့် ဆေးမရှိ သေးပေမယ့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေကတော့ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းတွေနဲ့ ခက်ခဲမှုတွေ ကို စိုးရိမ်ဖွယ်ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါ ..။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဆေးမထွက်ပေါ် လာသေးပေမယ့် USA မှာတော့ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး ရရှိနေပြီလို့သိရှိရပါတယ် ။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လွင်မိုးက အောက်တိုဘာ 22 Covid19 ကာကွယ်ဆေး USA မှာလူသန်း 200 စထိုးပြီ. ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက် ကနေရေးသားပြီး ပရိသတ်တွေကို အသိပေးမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီသတင်းကို CNN သတင်း ဥာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင် တဲ့ဆေး ပေါ်ထွက်လာပြီဆိုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခု လို့ဆိုရမှာပါ ။ ဒီစမ်းသပ်မှုကြီးအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ မကြာခင် ဒီရောဂါကြီးကို အားလုံးတိုက်ထုတ်နိုင်ကြတော့မှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
ပရိသတျကွီး ရေ Covid-19 လို့ချေါတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ဟာ Second Wave အနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးမှာ ထပျမံ ပြံ့ပှားလကျြရှိပါတယျ ။ ရောဂါကို ကာကှယျမယျ့ ဆေးမရှိ သေးပမေယျ့ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှအေားလုံး အစိုးရနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ကိုယျစှမျးဉာဏျစှမျးရှိသလောကျ ပူးပေါငျး ကူညီဆောငျရှကျပေးနကွေပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ပွညျသူတှကေတော့ စီးပှားရေး အကွပျအတညျးတှနေဲ့ ခကျခဲမှုတှေ ကို စိုးရိမျဖှယျရငျဆိုငျနရေဆဲပါ ..။
မွနျမာနိုငျငံဟာ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံ ဖွဈတဲ့ အတှကျ ရောဂါကို ကွိုတငျကာကှယျနိုငျဖို့ ဆေးမထှကျပျေါ လာသေးပမေယျ့ USA မှာတော့ ကွိုတငျ ကာကှယျနိုငျတဲ့ ကာကှယျဆေးတဈမြိုး ရရှိနပွေီလို့သိရှိရပါတယျ ။ ဒီသတငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ လှငျမိုးက အောကျတိုဘာ 22 Covid19 ကာကှယျဆေး USA မှာလူသနျး 200 စထိုးပွီ. ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျ ကနရေေးသားပွီး ပရိသတျတှကေို အသိပေးမြှဝပေေးလာခဲ့ပါတယျ ။
ဒီသတငျးကို CNN သတငျး ဉာနက ထုတျပွနျခဲ့တာဖွဈပွီး ကွိုတငျကာကှယျနိုငျ တဲ့ဆေး ပျေါထှကျလာပွီဆိုတော့ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပွညျသူတှေ အတှကျ သတငျးကောငျးတဈခု လို့ဆိုရမှာပါ ။ ဒီစမျးသပျမှုကွီးအောငျမွငျသှားပွီဆိုတော့ မကွာခငျ ဒီရောဂါကွီးကို အားလုံးတိုကျထုတျနိုငျကွတော့မှာပါ ပရိသတျကွီးရေ ..။
မန္တလေးတိုင်း ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် DAHILA တစ်ရှူးစက္ကူစက်ရုံတွင် အမျိုးသား (၁)ဦး ကရိန်းပိ သေဆုံး